SamSung Phone Latest News and Firmware
Samsung ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် Latest News and Firmware တွေဒေါင်းလို့ရနိုင်တဲ့
ဆိုဒ်ပါ ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ခင် သတိထားရမှာတွေကတော့
တွေကိုသေချာ ဖတ်ပြီးမိမိဖုန်းအမျိုးအစား သုံးတဲ့နိုင်ငံ စတာတွေကိုအဆင်ပြေမပြေသေချာဖတ်ပြီးမှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ဖုန်းထဲကိုထည့်သွင်းစေချင်ပါတယ်
Samsung ဖုန်း Latest News and Firmware ဆိုဒ်
Labels: phone firmware
Clean Master - Free Optimizer 5.7.0 APK
android ဖုန်းတွေသုံးစွဲရင်း လေးလာတဲ့အခါ ဒီ APK လေးကအသုံးဝင်စေပါတယ်
(၁) Junk Files ဆိုတဲ့အမှိုက်တွေကိုရှင်းလင်းပေးတာ
(၂) Memory မှာမလိုအပ်ဘဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Apk တွေကိုရှင်းလင်းပေးတာ
(၃)အသုံးပြုနေတဲ့ Apk တွေကို မန်မိုရီထဲမှာ Back up Apk အဖြစ် ပြန်ဖန်တီးပေးတာပါ
Clean Master - Free Optimizer APK 5.7.0 (File Size: 9.52 MB)
Labels: android app (Tool)
Android OS တွေမှာ Screen On/Off error
Android OS တွေမှာ Screen ကို Off လုပ်ထားပေမယ့် ဖုန်းကမကြာခဏဆိုသလို ပြန်ပြန်ပြီးပွင့်ပွင့်လာတယ် ဆိုရင်တော့အောက်ပါအချက်(၂)ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တတ် တာများပါတယ်
(၁) ဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ Application တွေရဲ့ Error ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၂) ဖုန်းရဲ့ OS ကြောင့် Setting Error ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်(၂)ချက်ထဲက ပထမအချက်ကိုဖြေရှင်း မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချို့ User တွေဟာတွေ့သမျှ Application တွေကိုမိမိဖုန်းထဲမှာထည့်ပြီးအသုံးပြုတတ် ကြပါတယ်။အဲဒီလိုထည့်ထားတဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေထဲမှာ တချို့ဆော့ဝဲလဲတွေက Update လုပ်ပေးရတဲ့ဆော့ဝဲလ် တွေရှိသလို အသုံးပြုခွင့်ရက်အကန့်အသတ်နဲ့အသုံး ပြုရတဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေလဲရှိပါတယ်။
Full version မဟုတ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လိုမျိုးပေါ့။အဲဒီအခါကျရင် Application Error တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲက Error ဖြစ်နေတဲ့ Application တွေကိုရှာရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ် Update လုပ်ရမယ့်ဆော့ဝဲလ်ဆိုရင် Update လုပ်ပေးရပါ မယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ပြောခြင်တာကတော့ Error ဖြစ်နေတဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ တစ်ချို့ ဆော့ဝဲလ်တွေက ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Error ဖြစ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့စာတမ်းပေါ်လာပါတယ်။တွေ့ဖူးကြမှာပါ။အဲဒီလိုမျိုး ကျရင်တော့ရှာဖွေရတာလွယ်ပါတယ်။တချို့ဆော့ဝဲလ် တွေကကျတော့ Application ရဲ့ Setting ထဲထိသွားကြည့် ရပါတယ်။တချို့ဆော့ဝဲလ်တွေကျတော့ Help ဆိုတဲ့ နေရာမှာ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် App ရဲ့ Certificate ရှိတဲ့နေရာ၊ ဒါမှမဟုတ် App ရဲ့ အညွှန်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာရှာဖွေ ရတာပါ။အကောင်းဆုံး ကတော့ ဖုန်းကို Application တွေကို Backup လုပ်ထားပြီး ဖုန်းကို Factory Reset လုပ်လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်
Ref >>>>> ( mmitsky)
Labels: android ဗဟုသုတ
စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ မည်သည့် Android OS သုံးဖုန်းမဆိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။
Labels: Android games, download, games
Fruit Ninja Version : 1.7.8
အခုလောလောဆယ် www.komyat.com ဘလော့ဂ်လေးကိုအသစ်ရေးသားနိုင်ဦးမည်မဟုတ်ပါ။
လိုအပ်သောအကူအညီနှင့်နည်းပညာများရှိလာပါက နည်းပညာတို့ ရဲ့ဆုံမှတ်များ ဖိုရမ်တွင်
အလည်လာရောက်လိုပါက http://mmict.net/index.php ကိုနှိပ်ပြီးလာရောက်လည်ပတ်ကြပါ။
Excel Password Recovery V2.0.5 Retail | 5Mb
Microsoft Excel နဲ့ စာရိုက်ပြီး မိမိဖိုင် လုံခြုံရေးအတွက် password ပေးပြီး မေ့သွားလို့
Labels: download, office software
WinUSB Maker 1.6 (x86/x64) - The Windows Setup to USB Solution
WinUSB Maker 1.6 (x86/x64) - The Windows Setup to USB Solution | 1.78 MB
USB ကို ready boot လုပ်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
•Full faster drive backup / restore, including the MBR, the user can make an full backup of the USB Drive including the MBR Boot Sector, and all stored files •Totally coded with maximum security, to avoid any error, With the Protection Platform, never is allowed the format of current Windows Drive •Can work with Setup DVD / Setup Folder / Setup ISO Image •Always format in NTFS System, make the device boot sector as same of HDD •Force dismount for all devices, forcing the format if the device is in use •Can makeaDOS / GRLDR automated Bootable USB Disk •Fastest file copy, maximum process priority level •Identify compatible setup folders •Support devices larger than 1TB •Capture only removable devices •Refresh all devices in one click •Auto-explain the functions if the cursor is drawn •Check the Folder and Device size, for better compatibility •Dynamic Progress Bar and specific File / Folder / Status shown for works •BIOS / EFI of the computer always recognize the USB Bootable as HDD, needed only make the boot for it * DOS Bootable disk always formatted in FAT32 * Drive restore will format with NTFS Filesystem, without remove all partitions Compatibity: •Windows 8 •Windows7•Windows Vista •Windows Server 2008 / 2011 Family •Embedded and Others based in Windows Vista /7/ 8
Labels: download, USBSOFTWARE
မနက်ဖြန်သို့ ရောက်သော် ယနေ့ဆိုသည်မှာ သမိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မည်။
ယနေ့ သင်လုပ်ခဲ့သမျှအတွက် နောင်တစ်ချိန်တွင် လူတွေက
သင်နှင့် သင့်တော်သော ခေါင်းစဉ်တစ်ခု တပ်ပေး ကြပါလိမ့်မည်။
ထိုခေါင်းစဉ်ကို သင် နှစ်သက်ချင်မှ နှစ်သက်လိမ့်မည်၊
သို့သော် ၎င်းမှာ သင်ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့သော သမိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
သူမိတ်ဆွေတို့ဗဟုသုတ
Email ရေးခဲ့ပါကအသစ်တင်တိုင်းမေးလ်ပို့ ပေးပါ့မယ် address:
Delivered by komyatblog@gmail.com
7-Zip for Windows DOWNLOAD
အွန်လိုင်းမှာ html လေ့လာမယ်
Adobe Pagemaker 7.0.2 (1)
android app (Tool) (1)
android ဗဟုသုတ (1)
Antivirus Software. (26)
Audio/Video Tools (22)
autocad 2005 မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Award Keylogger (2)
Basic HTML မြန်မာလိ်ုစာအုပ် (1)
Book . Microsoft Excel book မြန်မာလို (1)
Book . Networking စာအုပ် (1)
book everydayinternet (1)
book Making Blogမြန်မာလို(စာအုပ်) (1)
bookPageMaker 7.0 မြန်မာလို (1)
Cafezee အသုံးပြုနည်း(မြန်မာလို) (1)
ccproxy (မြန်မာလိုစာအုပ်) (1)
chatting tool (9)
Compression and Archiver software (2)
CRACKER လမ်းညွှန် (မြန်မာလိုစာအုပ်) (1)
CrackerGuide book (1)
design tools softwares (2)
Disk Optimizer And Cleaner (3)
Dj softwere (1)
Domain Name Server(DNS)စာအုပ် (1)
electronic softwares (1)
Gmail လျှိုဝှက်ချက်များ (မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Google ဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်လဲစာအုပ် (1)
hotfile.com/ မှဒေါင်းလုပ်ချနည်း (1)
Html (စာအုပ်မြန်မာလို) (1)
http://www.ziddu.com မှဒေါင်းလုပ်ချနည်း (1)
ifile.it မှ Download ချနည်း (1)
IndesignCS3 မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
iPad. iPod (1)
Isa server 2006 မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Learning CSS မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Microsoft Access စာအုပ် (1)
Microsoft Office 2010 book (1)
Microsoft Visual Basic 6.0 မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
MP3 To Ringtone Gold (1)
NET WORK စာအုပ် (မြန်မာလို) (1)
pdf tool (7)
program ဆိုတာဘာလဲစာအုပ် (1)
server2003 မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Small Office or Home Office Network (SOHO) မြန်မာလိုစာအုပ် (1)
typing tool (1)
Virus Removal Tool (7)
WINDOW7တင်နည်းမြန်မာလိုစာအုပ် (1)
WINDOW VISTA တင်နည်းမြန်မာလိုစာအုပ် (1)
Window XPတင်နည်းစာအုပ် (1)
wireless software (1)
ကိုမြတ် © 2008. Template by Dicas Blogger.